Tongasoa eto amin’ny Filankevi-Pitantanan’ny Global Voices i Juanita Leon · Global Voices teny Malagasy
Tongasoa eto amin'ny Filankevi-Pitantanan'ny Global Voices i Juanita Leon
Voadika ny 23 Jolay 2014 8:05 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Español, ଓଡ଼ିଆ , English
Juanita Leon, mpikambana vaovao ao amin'ny filankevi-pitantanana ny Global Voices
Faly izahay mampahafantatra anao an'i Juanita León, mpikamban'ny filankevi-pitantanana vaovao eto anivon'ny fianakaviana Global Voices.
Juanita no mpanorina ny Lasillavacia.com, tranonkalam-baovao mopmba ny fahefana any Colombia. Mpahay lalàna izy no manana ny Maîtrise-n’ ny Fanoratan-gazety avy amin'ny sekolin'ny fanoratan-gazety ao Columbia. Sakaizan'ny Harvard Nieman Fellow `06 izy. Izy no tonian'ny famoahana voalohany ny Flypmedia.com tao New York sy talen'ny famoahan'ny Semana.com. Izy no mpanoratra ny Firenen'ny Bala “Country of Bullets”, miresaka ny ady ao Colombia, ankoatra ny boky hafa. Nampianatra ny Vaovaon'ny Ady anaty Akata tao amin'ny Sekolin'ny Fanoratan-gazety tao amin'ny Oniversiten'i New York ary monina ao Colombia amin'izao fotoana izao.
“Nandray dingana hafa ny Global Voices amin'ny hevitry ny hoe tsy mianina loatra amin'ny fampahafantarana — na farafaharatsiny tsy izay fotsiny ihany — ny fanoratan-gazety fa miresaka ihany koa ny tafatafa ifanaovana,” hoy i Juanita. “Ity no sehatra ahitana ny feo mahaliana sy maranitra indrindra manerana izao tontolo izao voatsonga sy natambatra ka tsara kokoa izy lasa bolongana iray noho izy ireo voasingatsingana. Laboratoaran'ny hoavin'ny fanoratan-gazety ny Global Voices, izay atao mivaingana ny teorian'ireo to-tenin'ny internet. Amin'ny maha-mpanoratra an-gazety nomerika sy mpandraharaha ara-nomerika ahy, dia ohatra fakan-tahaka ho ahy ny Global Voices ary faly te-hirehareha aho ankehitriny fa ao anatiny.”
Juanita moa dia misolo toerana ny iray amin'ireo mpikamban'ny filankevit-pitantanana hatramin'ny voalohany, Rosental Alves. Niala sasatra amin'ny fikankevi-pitantanana i Rosental rehefa nahavita ny fanompoana valo taona. Hahatsiaro ny hafanam-pony sy ny fahendreny izahay.
Mihaona in'efatra isan-taona ireo mpikambana sivy ao amin'ny fitantanana ny Global Voices, ary navitrika, nanolo-tena ary taova iankinan'ny fahaveloman'ny fikambanana GV hatramin'ny nanorotoroana azy. Ny Filankevi-pitantanana dia ahitana ireo mpanorina roa, solontena telo avy amin'ny fikambanana ary mpikambana efatra ivelan'ny fikambanana.
9 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana